China Cuttable Heat Transfer Umhlambi abakhiqizi nabaphakeli |I-Alizarin
Landa & Imibuzo Evame Ukubuzwa
I-Cuttable Heat Transfer Flex
I-Ink Jet Transfer Paper
I-Ink Jet Transfer Paper (I-Ayina-On)
I-Ink Jet Transfer Paper (ithebula elisikiwe)
Iphepha Lokudlulisa I-Ink Jet Yefomethi Enkulu (ithebula elisikiwe)
Iphepha Lokudlulisa I-Laser Color
I-Eco-Solvent Printable Flex
I-Eco-Solvent inkjet media
Amaphrinta Okusabalalisa Agunyaziwe
I-Cuttable Heat Transfer Flock
Igama Lomkhiqizo: I-Cuttable Heat Transfer Flock
Ikhodi Yomkhiqizo: I-CCF-Flock
50cm X 15M, 50cm X5M/Roll,
eminye imininingwane iyadingeka.
zonke izinhlelo zokusika ezijwayelekile, njenge
I-Mimaki CG-75/130/160FXII CG-60SRII/130SRII,
Graphtec FC8600, CE6000,CE6000-F-Mark,CE LITE-50,Silhouette CAMEO,GCC-China RX II,Jaguar V,Puma IV, Expert II,AR-24,i-Craft njll.
I-Cuttable Heat Transfer Flock iyikhwalithi ephezulu yokudlulisa ukushisa kwe-viscose umhlambi osuselwa kufilimu ye-polyvinyl chloride, enobuhlakani kanye nokuthungwa ngenxa ye-fiber density ephezulu, ekhiqizwe ngokwezinga le-EN17, I-Cut table Flock isuselwa kufilimu ye-polyvinyl chloride ene-adhesive encibilikayo eshisayo kwifilimu ye-polyester. line, Excellent ukusika kanye weeding izakhiwo.Ngisho nama-logo anemininingwane kanye nezinhlamvu ezincane kakhulu zisikwa etafuleni.Innovative hot melt adhesive ifaneleka ukudlulisa ezindwangu ezifana ukotini, izingxube ze-polyester/ukotini kanye ne-polyester/acrylic, Nylon/Spandex njll. I-Cuttable Heat Transfer Flock ingasetshenziselwa ukuphrinta kuma-T-shirts, ukugqokwa kwezemidlalo nokungcebeleka, imifaniswano, ukuhamba ngebhayisikili. izindatshana zokugqoka nezokukhangisa.
I-Cuttable Heat Transfer Flock ingasetshenziselwa ukubhala amagama ngezikibha, ukugqokwa kwezemidlalo nokungcebeleka, izikhwama zemidlalo nezindatshana zokukhangisa.futhi ingasikwa ngawo wonke ama-plotter amanje.Sincoma ukusebenzisa ummese ongu-30°.Ngemuva kokukhipha ukhula, ifilimu ye-flexible cut idluliselwa ngomshini wokushisa.Sika itafula Flock ngefilimu ye-polyester enamathelayo, yenza ukushintshwa.
■ Yenza ngokwezifiso indwangu ngemifanekiso eyintandokazi enemibala eminingi.
■ Idizayinelwe imiphumela egqamile kuzindwangu zikakotini ezimnyama noma ezinombala okhanyayo noma eziyingxube kakotini/polyester
■ Ilungele ukwenza izikibha eziqondene nawe, izikhwama zikakhanvasi, amaphinifa, izikhwama zezipho, amaphedi amagundane, izithombe eziphondweni njll.
■ Iyayina ngensimbi yasendlini evamile nemishini yokucindezela ukushisa.
■ Okuwashekayo okuhle nokugcina umbala
■ Ukuguquguquka okwengeziwe nokunwebeka
I-Cuttable Heat Transfer Flock ingasikwa yibo bonke abaklami bokusika abajwayelekile njenge: Roland CAMM-1 GR/GS-24,STIKA SV-15/12/8 desktop, Mimaki 75FX/130FX series,CG-60SR/100SR/130SR,Graphtec CE6000 njll.
5.Ukusika isilungiselelo se-plotter
Kufanele ngaso sonke isikhathi ulungise ukucindezela kommese, isivinini sokusika ngokuya ngeminyaka yeblade yakho kanye Nobunzima noma usayizi wombhalo.
Qaphela: Idatha yobuchwepheshe engenhla nezincomo zisekelwe ekuhlolweni, kodwa indawo yokusebenza yekhasimende lethu,
ezingalawuleki, asiqinisekisi ukusebenza kwazo, Ngaphambi kokusebenzisa, Sicela uhlole kuqala ngokugcwele.
■ Lungisa indawo ezinzile, ekwazi ukumelana nokushisa efanele uku-ayina.
■ Shisisa i-ayina endaweni ye-< wool>, izinga lokushisa elinconywayo loku-ayina elingu-165°C.
■ Ayina kafushane indwangu ukuqinisekisa ukuthi ishelela ngokuphelele, bese ubeka iphepha lokudlulisa kuyo isithombe esiphrintiwe sibheke phansi.
■ Ungasebenzisi umsebenzi we-steam.
■ Qinisekisa ukuthi ukushisa kudluliselwa ngokulinganayo kuyo yonke indawo.
■ Ayina iphepha lokudlulisa, usebenzisa ingcindezi enkulu ngangokunokwenzeka.
∎ Uma uhambisa insimbi, ukucindezela kufanele kuncishiswe.
■ Ungakhohlwa amakhona namachopho.
■ Qhubeka noku-ayina uze ulandele ngokuphelele izinhlangothi zesithombe.Yonke le nqubo kufanele ithathe cishe imizuzwana engama-60-70 endaweni yesithombe engu-8”x 10”.Landela ngoku-ayina sonke isithombe ngokushesha, ukushisa lonke iphepha lokudlulisa futhi cishe imizuzwana eyi-10-13.
■ Pefa ifilimu elingemuva kusukela ekhoneni ngemva koku-ayina.
7.Ukudlulisa ukucindezela kokushisa
■ Ukusetha umshini wokucindezela ukushisa okungu-165°C imizuzwana engu-15~25 usebenzisa ukucindezela okumaphakathi.umshini wokunyathelisa kufanele uvalwe ngokuqinile.
■ Cindezela kafushane indwangu engu-165°C imizuzwana emi-5 ukuze uqinisekise ukuthi ibushelelezi ngokuphelele.
■ Beka iphepha lokudlulisa kulo isithombe esiphrintiwe sibheke phansi.
■ Cindezela umshini 165°C imizuzwana engu-15~25.
■ Pefa ifilimu yangemuva uqale ekhoneni.
Geza ngaphakathi ngaphandle AMANZI AMAKHANDA.UNGASEBENZISI I-BLEACH.Faka kumshini wokomisa noma ulengise ukuze wome ngokushesha.Sicela ungaluleki isithombe esidlulisiwe noma isikibha njengoba lokhu kungase kubangele ukuqhekeka, Uma ukuqhekeka noma ukushwabana kwenzeka, sicela ubeke ishidi lephepha elifaka amafutha elinamafutha phezu kokudlulisa nokucindezela ukushisa noma i-ayina imizuzwana embalwa uqinisekisa cindezela ngokuqinile kukho konke ukudlulisa futhi.
Sicela ukhumbule uku-ayina ngokuqondile endaweni yesithombe.
Ukuphatha Impahla Nokugcinwa: izimo ezingama-35-65% Zomswakama Ohlobene kanye nezinga lokushisa lika-10-30°C.
Ukugcinwa kwamaphakheji avuliwe: Uma amaphakheji avuliwe emidiya engasetshenziswa susa umqulu noma amashidi kuphrinta amboze umqulu noma amashidi ngesikhwama sepulasitiki ukuze uwavikele ezintweni ezingcolisayo, uma uwagcina ekugcineni, sebenzisa ipulaki futhi tape phansi onqenqemeni ukuvimbela umonakalo onqenqemeni lomqulu ungabeki izinto ezibukhali noma ezinzima emiqulu engavikelekile futhi ungazifaki.
Okwedlule: Ifilimu esobala ye-Eco-Solvent InkJet
Olandelayo: Eco-Solvent Ink Jet Backlit Film
I-Cuttable Heat Transfer PU Flex Premium
I-Cuttable Heat Transfer PU Flex Effect
I-Cuttable Heat Transfer PU Flex Ejwayelekile
Copyright © 2022 Alizarin coating co. ltd |Wonke Amalungelo Agodliwe